Uvalo kubasakazi boKhozi kudilizwa abasebenzi abawu-600 kwaSABC
ABAPHATHI boKhozi FM,uSbongi Ngcobo noZandile Tembe, abasembangweni wesikhundla sokuba wumphathi Isithombe:ESIGCINIWE
CHARLES KHUZWAYO | June 18, 2020
BAHLALELE ovalweni abasakazi boKhozi FM kulandela ukumenyezelwa kwezindaba zokudilizwa kwabasebenzi abangaphansi kwenhlangano yezokusakaza kuleli iSABC.
Omunye umthombo ongaphakathi uthe selokhu kuvele lezi zindaba ubuthongo abufiki kubasakazi abaningi.
Kuzokhunjulwa ukuthi akukhona okokuqala kusikazwa ukudiliza abasebenzi kule nhlangano ngenxa yesimo sezomnotho esingahambi kahle.
Okhulumela iSABC, uMmoni Seapolelo, uthe babalelwa ku-600 abasebenzi bale nhlangano abazodilizwa. UMmoni uthumele isitatimende esidalule ukuthi imbangela yokuphungulwa kwabasebenzi ukwethulwa kohlelo lwabo olusha.
"Lesi simemezelo silandela ukwethulwa kohlelo olusha olubizwa ngeTarget Operating Model, okuhloswe ngalo ukuguqula le nhlangano yezokusakaza ukuze ikwazi ukuzisimamisa ngakwezezimali, ikwazi ukuba ngumsakazeli womphakathi ngokugcwele."
Uthe iSABC ibhekene nesibopho sokugculisa izigidi zababukeli nabalaleli bakuleli ebasakazelayo. Eqhuba uthe abasebenzi abazogenceka bazonikezwa ithuba lokuxhumana neCommission for Conciliation, Mediation and Arbitration ukuze konke kuhambe ngendlela ebagculisayo.
Uthe benze isiqiniseko sokuthi balandele imigudu efanele ukuqinisekisa umthetho wabasebenzi, iLabour Relations Act 66 ka-1995, uyalandelwa ngendlela ukuze kungabikhona okugxobeka kwamalungelo abo.
UMmoni uphethe ngokuthi abamele izinyunyana nabangenazo bazokwaziswa ngokulandela umthetho obhekene nokudilizwa kwabasebenzi owuSection 189. Kwenzeka lokhu nje kulindeleke ukuba kuqale ukuhlungwa kwabazobanga isikhundla somenenja oKhozini, okuyisikhundla esisabanjwe okwesikhashana nguSibongi Ngcobo.